Ampihimamban'ny rano eto Madagasikara?
2010-10-15 @ 22:37 in Andavanandro
Manohy ny #BAD10 – Blog Action Day 2010 - water na andro ihetsehan'ny bolongana momba rano amin'ity 2010 ity angamba ny lahatsoratro. Nahatalanjona ny tena tokoa ny nampifandraisan'i simplex tamin'ny resaka nifanaovan'i Jesoa tamin'ilay vehivavy Samaritana teo am-patsakana toy ireny fitantarana sarimihetsika fitoriana fitiavana ireny. Ho an'izay tsy maharaka loatra ny fandehan'ny tantara nataony moa dia tsara ihany koa ny mamaky ny Evanjely na Filazantsara na Vaovao Mahafaly nosoratan'i Jaona toko faha-4 andininy faha-6 ka hatramin'ny faha-15, izany hoe ao amin'ny baiboly. Antoky ny fiainan'ny zavamananaina rehetra ny rano na ho an'ny biby izany na ho an'ny zavamaniry, ka tsy mahagaga raha manana ny anjara toerany manokana ihany koa amin'ny fivavahana io rano io, fitaovam-panadiovana izy amin'ny ankapobeny ary endriky ny fahateraham-baovao raha ny eo amin'ny sehatra kristiana raha ny batisa na batemy no heverina.
Saingy na dia toa miresaka fivavahana aza ny tena dia tsy any akory ny resaka fa ny momba ity rano ity aty an-drenivohitra. Fahakely dia mba nisotro rano tamin'ny paompy tokoa izahay indraindray. Nozarina ihany anefa ny tena hisotro rano avy nampangotrahana na dia efa mangatsiaka aza izany rano izany mba hahafaty ny mikroba mety hahatonga areti-kibo. Taty aoriana dia lasa nizatra tamin'ny rano tamin'ny tavoahangy novidiana somary lafolafo ihany. Toy ireny hoe miakatra fari-piainana ireny rehefa mividy rano amin'ny tavoahangy raha ny vahiny mpizahantany ihany no hita mpividy ireny ampolony taona lasa izay. Ka ireny, hono, no tsara antoka ho mahasalama ka dia izay izany. Tsy dia nahazatra loatra ny misotro rano notantavanina na dia tokony ho mora kokoa aza ny vidin'izy ireny.
Fa ny somary mahavariana ahy amin'ny resaka rano amin'ny tavoahangy ity dia ny endrika ampihimamba manjaka eto amin'ny firenena. Ny fantatro aloha dia telo no tena fantatra amin'ny fivarotana rano amin'ny tavoahangy amin'izao fotoana izao eto Madagasikara. Ny roa voalohany dia ny Eau Vive sy ny La Source mahasahana ny ampahany be dia be amin'ny tsena eto an-toerana dia orinasa iray ihany no miandraikitra azy. Henjana dia henjana angamba ry zareo amin'ny resaka dokambarotra ka saiky lasany ambongadiny manontolo ny tsena. Efa tsy hita intsony tokoa moa ny Olympiko izay nifaninana soa aman-tsara tamin-dry zareo ka tsy dia misy manohintohina loatra intsony ny lalany. Ny iray farany kosa no mora indrindra fantatro sady tsy ratsy velively saingy tsy mety mahasahana ny tsena fa dia ifampitadiavana vao mety hita, tsy mba mitatitra any amin'ny mpivarotra ihany koa angamba ry zareo ka izay no tsy mba ahitana azy loatra : Sainto. Araka ny fanamarihana nataona olona iray izay dia tokony ho amin'ny teny malagasy no hamakiana io vokatra farany io (Sento) saingy noho ny mety tsy hahaizan'ny vahiny mamaky ny anarany (hitanareo fa fatra-panaja vahiny loatra isika Malagasy) dia natao tahaka io ny anarany.
Mety hisy ny hafa any ho any amin'ny vokatra eto Madagasikara fa ireo ihany aloha no fantatro. Tsy dia niresaka loatra ny rano sy ny fiainana any ambanivohitra ny tena fa mba anjaran'ny hafa no tena mety. Ny tena moa tsy dia mpisotro rano loatra fa karazan'ny terena mihitsy vao mety hahatratra ny fatran'ny rano 1,5 litatra isan'andro izany. Fa mihamafana moa ny andro eto an-toerana ka dia mitady rano daholo ihany ny olona sy ny tena ka mba mahazo betsaka kosa ny mpivaro-drano sy zava-pisotro.
Jentilisa 16 oktobra 2010, amin'ny 00:36